शभापति देउवालाई आफ्नै पार्टीका नेताले दिए यस्तो झड्का ! व्यक्तिवादी चरित्र देखियो, आजदेखि उहाँलाई विपीको अनुयायी मान्दिन
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ माघ २३ मंगलबार |
डा. शेखर कोइराला, नेता, नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले चुनाव हारेपछि अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन गरेर नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर अहिले यो विषय ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रिय समिति र महासमिति बैठक कहिले बोलाउने पार्खाइको विषय बनेको छ । कांग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रिय सदस्य डा. शेखर कोइरालासँग ऋषि धमलाले अन्तरवार्ता लिएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि लिइएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ ?
कांग्रेसलाई चुनावमा प्रतिपक्षमा बस्न जनमत प्राप्त भएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ ।
कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न तयार भइसकेको हो र ?
तयारको कुरै छैन । जनमत नै प्रतिपक्षमा बस्नका लागि आएको छ । जनताको म्यान्डेटलाई मान्दैनौँ भन्न मिल्दैन ।
तर कांग्रेसले जनमतको कदर गरेन भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि आरोप लगाएका छन् नि ?
पार्टीका सभापति, महामन्त्रीले के भन्नुभयो आफ्नो ठाउँमा छ । तर जनताको म्यान्डेटअनुसार हामी प्रतिपक्षमा नै बस्छौँ ।
कांग्रेसले सत्तालिप्सा देखाएको छ नि ?
देखाएको छैन । केही व्यक्तिहरुले देखाए भन्दैमा कांग्रेसले देखाएको भन्न मिल्दैन । राजनीतिमा कतिलाई सत्ताको मोह हुन्छ । प्रतिपक्षमा बसेर कमजोर भएको संगठन बलियो बनाउनुपर्छ ।
पार्टी सभापति देउवाले जे भन्नुभयो त्यही मानिरहनुभएको छ नि ?
कहाँ मानेका छौँ । सभापतिले जे भन्नुभयो त्यो मान्ने कुरा होइन । यसमा स्पष्ट हुनुपर्यो ।
अब विधान संशोधन गरेर सभापति शक्तिशाली बन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ ?
सभापतिको चाहना होला । अहिले पनि शक्तिशाली नै हुनुहुन्छ । त्यसमा विमति छैन । तर महासमिति बैठक त बोलाउनुपर्यो नि । बैठक नै बोलाउनुहुन्न कि भन्ने शंका लाग्न थालेको छ ।
देउवासँग महासमिति बैठक बोलाउने तागत नदेखिएको हो ?
तागत छैन भन्दिन । उहाँले आफैँले महासमितिको बैठकको मिति तोक्छु भन्नुभएको थियो । तर अहिलेसम्म मिति तोकिएको छैन । त्यसैले शंका लागेको छ ।
देउवाले त आफू चुनाव हार्ने अनि मलाई दोष लगाउने भन्नुभयो नि ?
उहाँलाइै मैले विपिको अनुयायी ठान्थेँ । तर आजदेखि उहाँलाई विपीको अनुयायी भन्न छाँडे । विपीले कांग्रेसमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भयो भन्नुभएको थियो । त्यसलाई हामीले छोड्न सकेनौँ भने पार्टी कमजोर हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर देउवाले व्यक्ति हारेको हो कांग्रेस हारेको होइन भन्नुभयो । देउवामा पनि व्यक्तिवादी चरित्र हाबी भइसकेछ । नैतिकता भन्ने कुरा संस्थामा हुँदैन, व्यक्तिमा हुन्छ । तर त्यो उहाँले देखाउन सक्नुभएन । चुनावमा त पार्टीको हार हो नि ।
अब तपाईहरु कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ ?
विधिअनुसार नै कांग्रेस चल्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ । देश संघियतामा गइसकेको छ । तर पार्टीको संरचना एकात्मक शासन प्रणालीअन्र्तगत कै छ । हामीले धेरै काम गर्नुछ । त्यसका लागि महाधिवेशनको आवश्यकता छ । यो कुरालाई उहाँहरुले स्विकार गर्न सक्नुभएको छैन ।
त्यसोभए अब विशेष महाधिवशन बोलाउने कि अर्ली ?
विशेष होइन । अर्ली महाधिवेशन गर्नुपर्छ । त्योभन्दा पहिला विधान संशोधन गर्नुपर्छ । एक वर्षभित्र अर्ली महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ । यसका लागि म लागिपरेको छु ।
पार्टी सभापतिलाई दबाब दिन सक्नुहुन्छ ?
सभापतिलाई योभन्दा बढि के दबाब दिने ?
सभापति देउवाले चाहनुभएन भने के गर्नुहुन्छ ?
महासमितिको बैठक हुन्छ । हामी त्यहाँ बोल्छौँ नि । हामी उहाँलाई बाध्य पाछौँ ।
कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुले त देउवा नै निर्विकल्प नेता हो भन्छन् नि ?
कुनै बेला राजालाई पनि निर्विकल्प भन्थे । शेरबहादुरजी पनि निर्विकल्प होइनन् । यसमा स्पष्ट हुनुस् । एक वर्षभित्रमा अर्ली महाधिवेशन बोलाउनका लागि हामी पहल गछौँ ।
कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल र देउवाबिच भित्रि कोठामा बसेर सहमति हुन्छ । कुनैबेला पौडेलले देउवालाई हटाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले व्याक हुनुभएको छ । किन होला ?
त्यो त पौडेलजीलाई नै सोध्नुपर्छ । उहाँ पनि हाम्रो वरिष्ठ नेता हो । हामीहरुले मानेको नेता हो । तर उहाँहरु मिल्नुहुन्छ भने पनि, गाउँमा बस्ने कार्यकर्ता, जसले कांग्रेसलाई जोगाएर राखे, उनीहरु पनि संगठन धरापमा पर्यो भन्ने कुरा बुझेका छन् ।
कांग्रेस भागबण्डामा चल्छ । गुट उपगुटलाई भाग लगाइन्छ । पदीय भागबण्डामा गएर सम्झौता हुन्छ । कसरी सुध्रिन्छ कांग्रेस ?
समस्या यही हो । रामचन्द्रलगायतका नेताहरुको समस्या यही हो । अहिले देउवाले पनि उपसभापति, महामन्त्री लगायतका पद थप्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । थपेर भागबण्डा लगाउने सोच छ भने त्यो कुरा कार्यकर्ता र महासमिति सदस्यहरु मान्न तयार छैनन् भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
६०–४० को भागबण्डामा कांग्रेस अब चल्छ कि चल्दैन ?
अब कांग्रेस ६०–४० को भागबण्डाका आधारमा अगाडि बढ्दैन । शेरबहादुरजीलाई मत दिएर सभापति बनाउने साथीहरु पनि अहिले दिक्क भएका छन् । अर्को ग्रुपका साथीहरु पनि खुशी छैनन् ।
अब कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आउँछ त ?
आउनै पर्छ । अरु उपाय छैन । देउवा र पौडेल अभिभावक भएर बस्नुपर्छ । विगतमा उहाँहरुले देश र लोकतन्त्रका लागि धेरै लड्नुभएको छ । प्रजातन्त्रका लागि योगदान दिनुभएको छ । तर अहिलेको अवस्थामा उहाँहरु अभिभावकको रुपमा नबसेर नेतृत्व लिन खोज्नुभयो भने कांग्रेस झन कमजोर बन्छ । तर उहाँहरुले एउटा कलखण्डमा गरेको योगदान हामीले भुल्नुहुँदैन ।
नेतृत्व लिनका लागि तपाई तयार हुनुहुन्छ ?
म त तयार नै छु नि । अरु साथीहरु पनि तयार हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसलाई दरो बनाएर अगाडि बढ्ने हो । कसले नेतृत्व लिन्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिदैन । अधिवेशन भएपछि प्रक्रियाअनुसार हुन्छ । साथीहरुले तपाईहरु जस्तो मान्छेले नेतृत्व लिनुपर्यो भन्नुभयो भने सभापतिमा उठिन्छ ।
चुनावपछि तपाई, शशांक र सुजातापछि के सहमति भएको हो ?
कांग्रेसलाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल मात्रै भएको हो ।
संसदीय दलको नेता को बन्ला ?
प्रतिनिधीसभामा कांग्रेसबाट ६३ जनाले जितेका छन् । तिमध्ये जो पनि बन्न सक्छन् । चुनावमा जसले जित्छ उही बन्छ ।
देउवा, प्रकाशमा र शशांकको चर्चा छ नि ?
उहाँहरुबाहेक अरु पनि हुन सक्छन् । सम्भावना जसको पनि छ ।
शेरबहादुर देउवाको सम्भावना छ कि छैन ?
सम्भावना किन नहुनु ? ६३ जना सासंदले भोट गर्ने हो ।
दलको नेता बनाउनमा तपाईको पनि भूमिका हुन्छ होला नि ?
२,४ जना सासंद साथीहरु हामीले भनेको मान्नुहुन्छ । तर कोको उठ्छ, त्यसपछि कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँछ ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज नेपाल आएकोमा कांग्रेसले विरोध गरेको हो ?
विरोध गरेको होइन । एउटा कुरा के बुझ्नुपर्यो भने स्वराज भारतको विदेशमन्त्रीको हैसियतले आउनुभएको हो । आउट गोइङ सरकारसँग उहाँले कुरा गरेर अर्थ छैन । यसअर्थमा कित भारतले उहाँलाई पठायो, कि त एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बोलाउनुभएको हो । यसमा दुईमत छैन । तर नयाँ सरकार बनेको छैन । पहिल्यै आउनु जरुरी छैन । सरकार बनेको भोलिपल्टै आए पनि हुन्थ्यो नि । अहिले आउँदा शंका उब्जाइदियो । किनकी देश अहिले संक्रमणकालमा छ ।